Ordinasiona - Wikipedia
Ny ôrdinasiôna, amin' ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa, ary amin' ny lafiny sasany amin' ny Anglikana sy ny Loterana sasany, dia asa litorjika mampita ny sakramentan' ny asam-pisoronana kristiana atao hoe "sakramentan' ny filaharana". Ny eveka no manolotra izany sakramenta izany, ka antsoina hoe mpanamasina.
Hatramin' ny andron' ny Testamenta Taloha, ny asa fanompoan' ny Levita (isan' ny fokon' i Levy), ary koa ny asam-pisoron' i Aarôna sy ny fanokanana ireo Loholona miisa 70 (araka ny Nomery 11.25) dia fandaminana ny rafitry ny asam-pisoronana. "Mpisorona be araka ny asam-pisoronan' i Melkizedeka" (Heb. 5.10); dia rohy mampifamatotra ny Testamenta Taloha amin' ny Testamenta Vaovao ao amin' ny fiainan' ny vahoakan' Andriamanitra.
↑ "Ary nidina teo amin' ny rahonaJehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny Fanahy izay tao amin' iMosesy ka napetrany tao amin' ny loholona fito-polo lahy; ary raha mbola nitoetra tao aminy ny Fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony." (Ny Baiboly, Nomery 11.25). "Nidina teo amin' ny rahona Iaveh dia niteny tamin' i Moizy; nangalany ny fanahy izay tao amin' i Moizy, ka nataony tao amin' ny loholona fitopolo lahy, naminany izy ireo raha vao tonga tao aminy ny fanahy, nefa tsy notohizany izany." (Ny Baiboly Masina, Nomery 11.25).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinasiona&oldid=1036921"
Voaova farany tamin'ny 31 Aogositra 2021 amin'ny 14:25 ity pejy ity.